Farmaajo Archives - Axadle
Farmaajo ma ku guuleysan doonaa Colaada?
Galmudug, Dhismaha & Hirshabeelle ayaa qorsheynaya in ay hor istaagaan doorashooyinka looga hadlayo hub ka dhigista looga hadlayo ee qorshaysan in lagu qabto xarunta teendhada. Axadle Media ayaa ogaatay in Axmed Qoorqoor, C / casiis Laftagareen iyo Cali Guudlaawe ay qorsheynayeen inay ka qeyb galaan shirka Xalane iyagoo ku xiray labo shuruud oo kala ah. 1. In shirka laga raro xerada Xalane loona wareejiyo xarunta madaxtooyada. 2. In casuumaada shirka loo fidiyo Hogaamiyaha mudada xilkiisu dhamaaday. Hogaamiye…
Hogaamiye Farmaajo oo amrey calanka 3 maalmood
Dowladda Soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geeridii ku timid madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo caawa ku geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya. Dowladda ayaa sheegtay in saddex maalmood oo baroor diiq ah la qaban doono isla markaana hoos loo dhigi doono calanka Soomaaliya si loogu baroordiiqo geeridii Madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed. “Waxaan hoos u dhigeynaa Calanka Jamhuuriyadda muddo seddex maalmood ah si aan u muujino sida aan uga xunnahay geerida Madaxweynihii hore, anaga oo…
Hogaamiye Farmaajo oo daahiyey ansixinta
Hogaamiyaha Soomaaliya Maxamed C / llaahi Farmaajo ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo dib u dhac ku keentay ansixinta wax ka bedelka Dastuurka KMG ah, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya maalintii Khamiista. “Iyadoo aan waxba loo dhimayn qodobka 136aad ee dastuurka kumeelgaarka ah, madaxweynaha wuxuu dib u dhigay ansixinta dib u eegista dastuurka wuxuuna u gudbiyay qabyo qoraalka baarlamanka 11aad si ay u ansixiyaan guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka. Ansixinta Dastuurka KMG ah iyo qabyo…
Kheyre wuu ka gaabsaday inuu eedeeyo MW Farmaajo!
Raiisel wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna musharax madaxweyne Xasan Cali Kheyre ayaa khudbad dheer oo buuq badan dhalisay ka jeediyay kulan ay isugu yimaadeen musharixiinta madaxweynaha 2021.